MRB iri muShanghai, China. Shanghai inozivikanwa se "Kumabvazuva kweParis", Inzvimbo yeChina yezvehupfumi uye yezvemari uye ine yekutanga nzvimbo yekutengeserana yemahara yeChina (nzvimbo yekutengeserana yemahara).
Mushure memakore angangoita makumi maviri ekushanda, MRB yanhasi yakura kuita rimwe remabhizinesi akatanhamara muChina indasitiri yekutengesa ine hukuru uye simba, ichipa mhinduro dzakangwara dzevatengi vekutengesa, kusanganisira vanhu kuverenga system, ESL system, EAS system uye zvimwe zvigadzirwa zvine hukama.
Zvigadzirwa edu aivigirwa kunyika dzinopfuura zana uye kumatunhu kumba uye kunze. Nekusimbiswa kwakasimba kwevatengi vedu, MRB yakafambira mberi zvikuru. Tine yakasarudzika yekushambadzira modhi, timu yehunyanzvi, yakasimba manejimendi, zvigadzirwa zvakaisvonaka uye masevhisi akakwana. Panguva imwecheteyo, isu tinotarisana neepamberi tekinoroji, hunyanzvi uye kutsvagisa chigadzirwa uye kuvandudza kujekesa hutsva hutsva muchiratidzo chedu. Isu takazvipira kupa mhando yepamusoro uye dzakasiyana zvigadzirwa zvehunyanzvi nemasevhisi eindasitiri pasi rese, uye nekugadzira sarudzo yehunyanzvi yevatengi vedu.
MRB iri muShanghai, China.
MRB yakavambwa muna 2003. Muna 2006, taive nekodzero dzakazvimirira dzekunze nekutengesa kunze. Kubvira payakagadzwa, isu takazvipira kupa mhinduro dzakanaka kune vatengi vekutengesa. Yedu zvigadzirwa mitsara inosanganisira Vanhu kuverenga system, Elektroniki masherufu chitaridzi Sisitimu, Elektroniki Chinyorwa Chekutarisa Sisitimu uye yedhijitari vhidhiyo yekurekodha system, nezvimwe, zvinopa zvakakwana uye zvakadzama zvese-kutenderera mhinduro dzevatengesi vevatengesi pasi rese.
Chii chinoitwa neMRB?
MRB Inosarudzika muR & D, kugadzirwa uye kushambadzira kweVanhu kaunda, ESL system, EAS system uye zvimwe zvinoenderana zvigadzirwa zvekutengesa. Iyo tambo yechigadzirwa inovhara anopfuura mamodheru zana akadai seIr bream vanhu kaunda, 2D kamera vanhu vanopokana, 3D vanhu pakaunda, AI Vanhu kuverenga system, Vehicle Counter, Passenger counter, Elektroniki masherufu zvinyorwa zvine hukuru hwakasiyana, akasiyana smart anti-shoplifting zvigadzirwa .. etc.
Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya muzvitoro zvezvitoro, ngetani dzezvipfeko, muzvitoro, kuratidzira uye zvimwe zviitiko. Zvizhinji zvezvigadzirwa zvakapfuura FCC, UL, CE, ISO uye zvimwe zvitupa, uye zvigadzirwa zvakakunda kurumbidzwa kubva kune vamwe vatengi.
Nei uchisarudza MRB?
1. Anokodzera Kugadzira Machine
Mazhinji emidziyo yedu yekugadzira anotumirwa zvakananga kubva kuEurope neAmerica.
2. Kunaka kweR & D kugona
Isu hatina chete vedu vehunyanzvi vashandi, asi zvakare tinoshanda pamwe nemayunivhesiti kuitisa chigadzirwa kutsvagisa nekusimudzira. Kuburikidza nekuenderera mberi nekuedza, tinochengeta zvigadzirwa zvedu zviri pamberi peindasitiri.
3. Strict Hunhu Kudzora panguva 3 zvikamu zvisati zvatumirwa
■ Core Raw Material kudzora mhando.
■ Kupedza Zvigadzirwa Kuedzwa.
■ Kudzora kwemhando usati watumirwa.
4. OEM & ODM iripo
Ndapota titiudze zvaunofunga uye zvido zvako, isu tinoda kushanda newe kugadzirisa zvigadzirwa zvako.
Shamwari dzedu dzinobva munyika dzakasiyana dzeNyika.
Kudzidza zvakawanda nezvedu kuchakubatsira iwe zvimwe.
Shandisa makore edu makumi maviri eindasitiri ruzivo kukurudzira kunaka kwese uye zvigadzirwa zvakakunakira iwe.
Mutengesi pamwe nehunyanzvi anozopa iwe huwandu hwakazara hwemasevhisi panguva yese iyi.
7 * 24 maawa ekupindura mashandiro.
Technical rutsigiro technical technical service
7 * 24 maawa online rutsigiro
Yakareba garandi sevhisi
Nguva dzose basa rekushanyazve
Nyowani chigadzirwa kusimudzira sevhisi
Yemahara chigadzirwa kusimudzira sevhisi